motorola droid turbo 2 kuongorora
Kuru Nhau & Ongororo Motorola DROID Turbo 2 Ongororo
Motorola iri pamupumburu, pane & rsquo; s isina kukahadzika icho chisingarambike chokwadi. Kusiyana neMotorola yekare, iyo yakaburitsa nharembozha nyowani mukati megore, nhasi & rsquo; s Motorola, yava kambani yeLenovo, ine yakawanda yakatsanangurwa portfolio ine zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinotakura zvinhu.
Ikozvino, haizo & rsquo; kuve Motorola-senge isina yayo yakakosheswa DROID mutsara weVerizon Wireless. Pasina mubvunzo kutaura, i & rsquo; s hukama hwakareba pakati pemakambani maviri. Gore rakapera, iyo DROID Turbo yakanakidza vanhu vazhinji kwete chete kune avo ari nani masheetti pane iyo 2014 Moto X, asi zvakare yakaratidza kune vanotsoropodza kuti nhasi & rsquo; s mafoni ekupedzisira-ekupedzisira achiri kugona kuendesa hupenyu hurefu-bhatiri.
Kudzoka kutenderera kwechipiri, mutsivi wayo mune rakanyatsodanwa zita rekuti DROID Turbo 2 anotarisira kuenderera neyakajaira - uku achikwaziswawo neyakajairika nzira yekuvandudza uye kukwidziridzwa. Negore rino & rsquo; s modhi, zvisinei, inonamira pane humwe hunhu hwakasarudzika & rsquo; inoshaikwa mune mazhinji emazuvano & rsquo; s ekutanga zvigadzirwa. Izvo, vanhu, hapana chimwe kunze kwekutamba dhizaini isingapindike iyo inogona kumira nemisungo iyo yatinombosangana nayo muhupenyu hwedu.
Iyo pasuru ine:
Kurumidza kutanga gwara
Kuchengetedza & ruzivo rwewaranti
SIM yekubvisa chishandiso
Kuvakwa kwaro kwakakombama-kunge kunowedzeredzwa neyakagadziridzwa dhizaini yayo kuburikidza neMoto Muiti.
Kunakisa, iyo DROID Turbo 2 ine zvishoma zvechisimba dhizaini pane yakatangira iyo. Icho & rsquo; hachisi chinhu chakashata sega, uchiona kuti yakatsika tsoka tsoka inoita kuti zvive nyore kwazvo kubata pane kutaura, iyo Moto X Yakachena Edition. Ipo ichigovana zvimwe zvekugadzira aesthetics yeMotorola & rsquo; s inokosheswa mudiwa, iyo DROID Turbo 2 inofarira dhizaini ine chakavanzika kune arch yayo - yakazadzwa nesimbi yakakora trim bezel. Kubva kure, iyo & rsquo; s inosarudzika ichizvirumbidza mazhinji ekugadzirwa kweiyo Moto X Yakachena Edition, senge ndiro yesimbi iyo & rsquo; inokomberedza iyo Motorola logo uye kamera lens kumashure, asi & ldquo; DROID & rdquo; zita rakapurasirwa kumusana rinoita kuti rive risingakanganisike.
Yedu chaiyo yeyuniti chena DROID Turbo 2 ine embossed katatu pateni yakasungirirwa pamakamuri ayo anokoshesa mameseji. Iko & rsquo; s zvechokwadi ipurasitiki isinganzwisisike inonzwa kuchinhu chose, asi zvinonyanya kukosha, inobatsira mukuipa kupera kwakachena uko kusinga ratidze chero zvigunwe zvemunwe kana smudges. Kuenda neiyi setup chaiyo kwakakosha, sezvo zvishandiso zvinoshandiswa pano zvese zvinobatsira kupa iyo DROID Turbo 2 kuwedzera kwayo kugadzikana - uko & rsquo; inokwanisa kupinza zvinotyisa nekuda kwemadonhwe, pasina kutya foni & rsquo; s kuvakwa kuri kukanganiswa.
Nepo dhizaini iri yakadzikiswa zvishoma pamusoro pegore rapfuura & rsquo; s hasha dhizaini, iyo DROID Turbo 2 inobatsira nekupa zvimwe zvakagadziriswa neyakagadzirwa kuburikidza neMoto Maker. Zvakafanana neMoto X Yakachena Edition, unogona kugadzira iyo DROID Turbo 2 kune yako yaunofarira - kusarudza mhando yezvinhu, mavara, uye kunyangwe kunyora. Kunze kweye yakapfava yekubata muviri casing, iwe unogona kusarudza kuenda nebonyu nylon kana pebbled dehwe kupera, uchichipa kutarisisa uye kunzwa. Izvi zvoga zvinowedzera dhizaini kwazvo, uko mafoni mashoma kwazvo ane iyi nhanho yekugadzirisa.
Motorola & rsquo; s yemazuva ano dhizaini DNA iri pachena kuti yakanyatsogadzikana neiyo DROID Turbo 2, asi inoona musiyano wakanangana neMoto X Pure Edition nenzira yekuvakira-mukati isina waya kuchaja, kunova kurapa kwakawedzerwa kweiyi DROID.
Kunze kwaizvozvo, zvinonyanya kutevera mushure meMoto X Yakachena edition, iyo isingafanirwe & rsquo; t isishamise zvachose. Semuenzaniso, ivo & rsquo; ivo zvakare vakagadzira inobatika LED mwenje nekamberi-yakatarisana kamera, kuona kuti zviso zvakanyatso kuburitswa mune isina kudzikama mamiriro emwenje. Zvakare zvakafanana, iyo setup yekamera kumashure neayo maviri-toni LED mwenje uye yakadzoserwa Motorola nub.
Dhizaini dhizaini chinhu chimwe, kusava nemvura chinhu zvachose. Isati yaziviswa zviri pamutemo, takasekwa netarisiro yekuti haina mvura. Maiwe, izvo & rsquo; hazvisi izvo chaizvo, nekuti zvinopa iwo mwero wakaenzana wekudzivirira mvura seyakautangira, nekuda kweayo epamberi nano-kuputira tekinoroji. Kupfuura kugona kutsungirira kudonha kudiki kwetsaona, kana kushandiswa pasi pemvura inonaya, & rsquo; s haina kuitirwa kurarama kunyudzwa kwakazara. Zvakadaro, isu & rsquo; tichatora chikamu chayo chekudzivirira mvura.
Motorola YAKANYA Turbo 2
5.9 x 3.07 x 0.36 inches
Iwe & rsquo; haufanire kumbonetseka nezvekudonhedza foni yako nekuda kweShatterShield kuratidza.
Kukwezva kukuru muDROID Turbo 2 & apos; s 5.4 & rdquo; QHD skrini ndiyo nyowani ShatterShield tekinoroji.
Nayo, iyo & apos; s senge kutenga smartphone ine isina chaipenya skrini inodzivirira isati yaiswa! Asi, zvinonyanya kukosha, iyo & apos chiratidzo cheplastiki OLED tekinoroji inozopedzisira yauya pamwechete kuzopa vanoshandisa smartphone rugare rwepfungwa. Sei?
Zvichitaurwa zviri nyore, hapana girazi pachinhu ichi, kunyange chiri & zvakaoma chaizvo kutaura! Iyo DROID Turbo 2 inoratidzira gungano rakakamurwa mumatanho mashanu, yakagadzirirwa kugadzikana kwakanyanya. Inotanga nealuminium chassis inobata iyo AMOLED pani, ichipa chimiro chekuvimbika. Pamusoro pepaneru re AMOLED hapana kana imwe chete, asi maviri anobata-anonzwisisa manhamba - kana yekutanga ikakundikana, yechipiri inotora pakarepo. Hapana kubvumirana pano! Tichienda kumusoro, isu tinowana iyo 'yemukati lens', inova iri yakajeka yakajeka irinoshanda inoshanda seyakajeka inodzivirira nhovo. Chekupedzisira, iyo yemukati lens inovharwa neyechipiri, yekunze yekudzivirira lens ine yekudyira yakaoma kupfeka inochengetedza kukuvara. Izvi ndizvo zvinopedzisira zvigunzva minwe yako paunenge uchishandisa iyo yekubata.
Zvese izvi zvinotaridzika zvinoita kunge zvinokunda, asi iyo & rsquo; s inokosha inovimbisa kuti inoramba ichishanda zvisina mhosva kunyangwe ichidonhedzwa. Ipo mamwe masikirini anogona kutsemuka kana kupwanya mushure memadonhwe mashoma, iyo ShatterShield kuratidza inokwanisa kutsungirira akawanda madonhwe pasina chiitiko. Kunyangwe kubva pakukwirira kwemamita mashanu, wobva wasangana nekongiri nechiratidziro chinokanganisa kutanga, hapana & rsquo; s haina kukuvara kwazviri chero.
Ko zvakadii nezve humwe hunhu hwekuratidzira kwayo? Huye, iyo & rsquo; s yakajairika AMOLED munzira iyo inogadzira yakanyanya-yakazara macolors, akafara ekuona angles, uye iro rakakwana dema dema. Kunyangwe paine zvisakarurama musirGB color gamut chati, iyo pani inonunura yakanaka tembiricha tembiricha ye6849K. Kubva pakuonekwa kwayo, zvakadaro, iyo skrini inoratidza yero yero. Munguva pfupi yapfuura, isu & rsquo; takaona kuvandudzwa kwakaitwa kune AMOLED tekinoroji kana zvasvika pakuvhenekera, asi iyo DROID Turbo 2 inokwira kumusoro padiki 315 nits. Nepo iyo tally inogona kusundidzirwa kune 445 nits kana iyo & rsquo; yakaiswa pane otomatiki marongero, iko kuishandisa neiro zuva cranks musiyano wayo zvakatonyanya, i & rsquo; s haisati iri papi padhuze zvine simba seMoto X Pure Edition.
Mazuva ano, Quad-HD resolution haishamise. Motorola inokwanisa kusiyanisa kuratidzwa kwayo pano muDROID Turbo 2 nekuiperekedza neiyo inopwanya-inodzivirira skrini. Vimba nesu, icho & rsquo; s chinhu chakakosha kuva nacho, nekuti pane imwe nguva panguva yehukama hwako nefoni, iwe & rsquo; uchazvirasa - chero zvingave netsaona kana nechinangwa. Zvakanaka, zvinongonaka chete kuti uzive kuti inovimbiswa kuti irarame. Izvo zvoga hunhu hunogona kutorwa nemafoni mashoma!
(Zvakanaka) 1: 1930
(Kugona) 1: 1593
iphone 12 pro max screen inodzivirira
moto g 3 mazera kesi
Sony Xperia 10 III ongororo
Samsung Galaxy Watch 3 vs Galaxy Watch Inoshanda 2 vs Apple Watch Series 5: dhizaini, tsananguro uye maficha kuenzanisa
Pixel 3a vs Pixel 3: aya ese misiyano
Tarisa uone ino inoshanda uye inyore Bluetooth keyboard kune iyo iPhone 6 Plus
Maitiro ekugonesa ekuvandudza mamodheru uye sarudzo pane Samsung Galaxy S6, Cherechedzo 5 (Android TouchWiz dzidziso)
Apple yakaita mari ingangoita seSamsung neHuawei zvakabatana muQ2 kunyangwe hazvo yakaderera iPhone kutengesa
Chirevo chinotaura kuti T-Mobile yakadzinga vamwe vashandi mavhiki mashoma kubva kumutsetse wekupedzisira